Saturday May 26, 2018 - 11:02:30 in Wararka by Super Admin
Duufaanta Makono ayaa aroornimadii hore ee saaka ku dhufatay xeebaha wadanka Sacuudiga kadib markii ay cagta soo marisay wadamada Yemen iyo Cummaan.
War rasmi ah oo kasoo baxay hay'adda saadaasha hawada dowladda Sacuudiga ayaa lagu sheegay in duufaanta oo wadata dabeyllo iyo roobab daadad wata ay ku dhufatay dhulka xeebaha ayna jiraan cabsiyo ku aadan in ay khasaara baaxad leh geysato.
Duufaanka Makono ayaa jartay isgaarsiinta iyo waddooyinka iyo dhul baaxad leh oo dhaca Koonfur Bari wadanka Sacuudiga, magaalada Jidda ee badda cas ku teedsan ayaa kamid ah meelaha ugu daran ee laga cabsi qabo in duufaantu dhibaatada ka geysato.
Shalay oo jimca aheyd duufaanta Makono ayaa cagta marisay gobollo katirsan wadanka Cummaan waxaana ku dhintay ugu yaraan hal qof sida ay sheegeen saraakiisha Booliska.
Gobollada Dafaar iyo Salaalaha ayay biyo daadad wata maasheeyeen, Video lagu faafiyay baraha internet-ka ayaa muujinayay biyaha oo qaaday gaadiid islamarkaana magaalada xaaqay.
Duufaantan ayaa laba maalin ka hor waxay ku dhufatay Jaziiradda Socotra ee wadanka Yemen halkaas oo ay ku dishay 17 qof islamarkaana ay burburisay laba Markab xilli ay ku xirnaayeen dekadda weyn ee Jaziiradaasi.
Dowladda Itoobiya oo 50,000 oo qof u diraysa Wadanka Imaaradka Carabta.
Mareykanka oo qiray in Sarkaal katirsan ciidanka Khaaska ah looga dilay Wadanka Afghanistan.
in kabadan 50 qof oo lagu dilay Weerar ka dhacay Galbeedka Wadanka Itoobiya.
Talibaan oo Askar American ah ku dishay Wadanka Afghanistan.
Jeneraal Ciidan oo Madaxweyne ka noqday Wadanka Muritaaniya.